'Aza mandeha': ny departemantam-panjakana amerikana dia nampiakatra ny fampitandremana momba ny dia an-tany any Venezoela ho amin'ny haavo 4
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » 'Aza mandeha': ny departemantam-panjakana amerikana dia nampakatra ny fampitandremana momba ny dia an-tany any Venezoela ho amin'ny haavo 4
'Aza mandeha': ny departemantam-panjakana amerikana dia nampakatra ny fampitandremana momba ny dia an-tany any Venezoela ho amin'ny haavo 4
Ny departemantam-panjakana amerikana dia nanandratra ny fampitandremana momba ny dia an-tanindrazana ao Venezoelà ho an'ny olom-pirenena amerikana mba "tsy handeha", noho ny korontana sivily.
Namoaka ny fampitandremana mena ambaratonga faha-4 ny departemanta tamin'ny talata tolakandro, nampitandrina ny Amerikanina hisoroka ny firenena noho ny “heloka bevava, korontana sivily, fotodrafitrasa mahantra”, ary “fisamborana sy fitazonana am-ponja” ny olom-pirenena amerikana.
Mampitandrina ny olom-pirenena amerikana amin'ny “tsy fandriam-pahalemana politika mitohy” sy ny mety ho tratry ny fihetsiketsehana an-dalambe mahery vaika izay mety hitranga “tsy misy fampandrenesana kely” ny toro-hevitra vaovao momba ny dia.
Ny fampitandremana "mafy" dia mamporisika ny olom-pirenena amerikana tsy miankina handao an'i Venezoela, mametraka an'i Venezoela amin'ny sokajy mitovy amin'i Syria sy Korea Avaratra. Andro vitsivitsy taorian'ny nandidian'ny Etazonia ny famoahana ireo mpiasa tsy vonjy maika tao amin'ny masoivohon'i Caracas, izay namela azy hanana “fahaizana voafetra” hanome serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana any.
Nanamafy ny fanerena an'i Venezoela ny Etazonia tamin'ny herinandro lasa teo, ny fanekena ny filohan'ny mpanohitra ho filohan'ny tetezamita ary niantso an'i Maduro hiala izy. Washington dia nametraka sazy vaovao ho an'ny orinasam-panjakana Venezoela PDVSA ny alatsinainy, nahatonga ny fiampangana avy amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny fa nanao fanonganam-panjakana i Etazonia.
Misokatra ao Beverly Hills ny Hotely AC voalohany an'ny Los Angeles an'i Marriott
Rafitra maharitra ilaina amin'ny orinasam-pizahantany kely sy salantsalany hoy ny minisitra Bartlett